भेट्नो कु’हिएर झ’रेका दुईवटा फलले रुखै मै हुँ भनेर दा’बी गर्न मिल्छ?- प्रधानमन्त्री ओली – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारभेट्नो कु’हिएर झ’रेका दुईवटा फलले रुखै मै हुँ भनेर दा’बी गर्न मिल्छ?- प्रधानमन्त्री ओली
भेट्नो कु’हिएर झ’रेका दुईवटा फलले रुखै मै हुँ भनेर दा’बी गर्न मिल्छ?- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ- नेकपाको एक खेमाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खिया लागेका दुई वटा ‘न’टबोल्ट ’ फु’त्किएपछि आफ्नो पार्टी गतिशील बनेको दा’बी गरेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा शनिबार आ’योजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई स’म्वोधन गर्दै उनले खि’या लागेका ‘न’टबोल्ट ’ आफैँ फु’त्किएको र पार्टीको गाडी ती’व्र भएको दा’बी गरे। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगबाट एउटा पत्र पाएँ। उहाँहरुले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ। असली हामी हौँ भन्दै।
यो बरमझियाको बुढाको पे’डा पसल हो? सक्कली र नक्कली? पेरिसडाँडामा १२–१५ जना बसेर पत्रकार स’म्मेलन गर्नु भएको छ।’ उनले प्रचण्ड-नेपाल खेमालाई ल’क्षित गर्दै भने, ‘जसको घर हो, ऊ निवेदन हाल्न जान्छ? मेरो घर हो भनेर? हामीले बनाएको पार्टी मेरो हो भनेर हामी निवेदन हा’लिरहन पर्ने छैन। भेट्नो कु’हिएर झ’रेका दुई वटा फलले रुखै मै हुँ भनेर दा’बी गर्न मिल्छ?’ ओली त्यतिमा सीमित भएनन्। उनले भने, ‘अलिअलि मान्छे त सिसीमा औ’षधि बिक्री गर्नेले पनि रत्नपार्कमा जम्मा गर्छ उहाँहरुको हालत त्यो भन्दा बढी हुने छैन।
टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानोगोला भएको सबैको औ’षधि बिक्री गर्न रत्नपार्कमा केही मानिस भेला गर्ने काम अब उहाँहरुको हो। उहाँको राजनीति छैन। उहाँहरुको देश, जनता र लोकतन्त्र पनि होइन। संविधान पनि होइन। संविधान संशोधन गरेकोमा, नयाँ नक्सा छा’पेकोमा क’त्रो पी’डा?’ उनले खा’इपिएर कार्की बै’ङ्केटमा गएर ओली नि’कालेको पत्र बो’केर नि’र्वाचन आयोग पुग्दा आयोगको आ’युक्तहरु कति हाँसे होलान्? ओलीको थप प्रश्न थियो। उनले भने,‘ जसको क’टेरो, उसको पु’छर बाहिर।’